Nepali Rajneeti | “आयुर्बेद औषधीले को’रोना निको भएको दाबी, खाने मानिस मिडिया,मा, के हो बास्तबिकता ?
“आयुर्बेद औषधीले को’रोना निको भएको दाबी, खाने मानिस मिडिया,मा, के हो बास्तबिकता ?
जेठ १, २०७८ शनिबार १८४ पटक हेरिएको
“विश्वभर कोरोना भाईरसको आतंक मच्चिरहेका बेला नेपालमा भने को-रोनासंगै राजनीति पनि मच्चिएको छ । सरकारको जोडघटाउ जारी छ भने कोरोनबाट दिनहुँ सयौं मानिस मरिरहेका छन् ।”
“अहिले सम्म कोरोनाको लागी आधिकारीक खोप तथा औषधी बनेको छैन । संसारभरका बैज्ञानीकहरु कोरोनाको औषधी पत्ता लगाउनमा व्यस्त छन् । नेपाल सरकार भने जनताको चासो भन्दा नी आफ्नै राजनीतिमा रुमालिएको छ ।”
“एक कम्पनीले निकालेको श्री श्वास अवलेह नामक औषधीको सेवनले कोरोना निको भएको छ । जैविक जडिबुटीको मिश्रणबाट बनाईएको यो औषधीको सेवन गरेका बिरामीहरु आफू आयुर्वेदिक औषधीबाटै निको भएको दाबी गरेका छन् । अद्यपी कम्पनीले कोरोनाको औषधी नभई पुन ताजकी दिने, खोकी, श्वासप्रश्वासको समस्याबाट छुटकरा गराउने औषधी बताउँदै आएको छ”।
“यदी उक्त औषधीले कोरोना निको हुने भए अब सरकार र आयुर्बेद चिकित्सकहरुको ध्यान त्यता तिर जान जरुरी छ । यो महामा’रीमा यस्ता प्रकारका सुखद् समाचारले पक्कै पनि हामीमा उर्जा भर्नेै छ ।